Wararkii ugu Dambeeyey: Guriga Madaxweyne Caan oo Dab la qabad siiyay.. | Balanbaalis.Com	Wararkii ugu Dambeeyey: Guriga Madaxweyne Caan oo Dab la qabad siiyay.. – Balanbaalis.Com
Wararkii ugu Dambeeyey: Guriga Madaxweyne Caan oo Dab la qabad siiyay..
Dalka Congada Dimuqraadiga ayaa lagu soo waramaya in Maleeshiyaad laga shakisan yahay in ay taageersan yihiin falaagada dowladda ka soo horjeedda ay gubeen guri uu lahaa madaxweynaha Dalkaasi Joseph Kabila.
Wararka ayaa sheegaya in marka dabka la qabad siinayay gurigiisa uu Mr Kabila ku sugnayn guriga,islamarkaana uu dibadda uga maqnaa.
Muuqaalo iyo Sawirro la soo dhigay baraha ay bulshada ayaa muujinaya dab xoogan oo ka kakacay guriga madaxweyne Kabila,taasi oo siweyn loo hadalhaayo.
Intii falkaasi uu socday ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in lagu dilay halkaasi ciidamo ilaalo ka hayay gurigaasi,sida ay sheegeen Saraakiisha amaanka,waxana guriga uu kuyaalay Gobolka Dhinaca Waqooyi ee Dalkaasi ee Kive.
Sarkaal ka tirsan milateriga Koongo ayaa sheegay in koox maleeshiya ah ay isku dayayeen inay xadaan hantida taalay guriga.
Joseph Kabila ayaa waxaa uu wajahayay dibadbaxyo baahsan oo qaar ka mid ah ay ka dhacayeen gobolka Waqooyiga Kivu, kuwaas oo salka ku hayay diidmadiisii ku aadanayd inuu xilka banneeyo walow xilligii rasmiga ahaa ee ay aheyd inuu jagada hayo uu ku ekaa sannad ka hor.
Inta badan wadamada Afrika ayaa waxaa kajira dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah,saasi oo keentay falalka Afgembiga la xiriira.
Dhawaan ayay ahayd markii Militariga Dalka Zimbabwe ay xilkii ka tureen Madaxweyne Robert Mogabe kadib markii uu diiday in talada uu wareejiyo,taasi oo daba socotay khilaafaad siyaasadeed oo dalka uu hareeyey.